Thanks to ku dhiirigelinayaan in uu, iPad iyo iPhone ayaa camera la yaab leh in sawiro qaado. Photos Kuwani waa xusuus ah oo aad doonayo in uu mar walba la ilaasho. Mararka qaarkood waa inaad qaar ka mid ah sawirada boggayaga computer oo aan jeclaan lahaa in aan wareejiyo iPad iyo iPhone, si aanu ku qaadi kartaa waqtiyada oo dhan. Si aad u samaysid iyada, waxaad u baahan tahay qaar ka mid ah qalab dhinac saddexaad si ay u gudbiyaan iPad iyo iPhone sawiro. Maqaaladani waxay muujinaysaa ugu fiican ee sawir-ada kala iibsiga u iPad iyo iPhone, oo wuxuu wataa weeraryahanka inaad dhan faa'iidada iyo khasaaraha iyo isticmaalka, si aad mar dambe ma wax dhib ah sawiro ka iPhone ama iPad wareejinta wajihi doonaan. Intooda badan waa barnaamijyadooda kala iibsiga sawir oo lacag la'aan ah. Bal aan iska hubi.
Top 10 Apps Transfer Photo u iPad iyo iPhone
Looga baahan yahay OS
Fotolr Photo Album Free 4.5 / 5 20.1MB macruufka 3.2 ama ka dib
Transfer Simple Free 5/5 5.5MB macruufka 5.0 ama ka dib
WordPress Free 5/5 26.4MB macruufka 7.0 ama ka dib
WiFi Photo Transfer Free 5/5 4.1MB macruufka 4.3 ama ka dib
Photo Transfer App $ 2.9 4.5 / 5 12.1MB macruufka 5.0 ama ka dib
Transfer Image Free 4/5 7.4MB macruufka 6.0 ama ka dib
Transfer Wireless App $2.99 4/5 16.7MB macruufka 5.0 ama ka dib
WiFi Photo Transfer Free 4/5 12.8MB macruufka 6.0 ama ka dib
Pro Photo Transfer $ 0.99 4/5 16.8MB macruufka 7.0 ama ka dib
PhotoSync $2.99 4/5 36.9MB macruufka 6.0 ama ka dib
1.Fotolr Photo kala iibsiga Album-sawir iyo maarayn
Fotolr waa app ah kala iibsiga sawir fiican ee iPad iyo iPhone. Waxa uu leeyahay interface user fiican, uma baahnid inaad wax cable oo aadna ku badbaaddeen ka kaaftoomi ee waday cable dheeraad ah waqtiga oo dhan. Waxa keliya ma aha sawiro ka iPad iyo iPhone wareejiyo computer, iyo qeybsanaan ku xigeenka, laakiin sidoo kale si toos ah iyaga la wadaaga u goobaha bulshada. Waxa kale oo ay kala sooci karaa iyada oo sawiro aad by u sameynta albums kala duwan iyo gelinaya sawiro kala duwan ee albums kala duwan. Photos ayaa waxaa lagu muujiyey sida haddii aad daawashada taariikh iyo xataa meesha juquraafi ahaan la tagged doonaan.
Baro wax badan oo ku saabsan suuqa kala iibsiga Fotolr Photo Album-sawir iyo maarayn ( https://itunes.apple.com/us/app/fotolr-photo-album-photo-transfer/id433378549?mt=8 )
Kala iibsiga 2.Simple
Waxa kaliya mid ka mid kale oo ka mid ah ugu wanaagsan ee iPad iyo iPhone kala iibsiga sawirka oo la soo bixi badan hal milyan oo jeer. Waa mid aad u fudud in aad nuqulka sawiro ka iPad iyo iPhone si aad u computer iyo waxa ay sidoo kale wuxuu dhawraa-Meta xogta sawirrada. Dhamman sawirada iyo videos on your computer ayaa loo gudbin karaa si aad u iPad iyo iPhone via Wi-Fi. Waxay bixisaa macnaha farsamo ilaalinta, waxaad samaysan karta code pass inay helaan a. Sidoo kale waxa uu ku soo rogay ma xadka sawirka wareejiyo le'eg, sidaas aad tahay gebi ahaanba bilaash ah. Waxa kale oo ka shaqeeya dhammaan hababka ka hawlgala oo ay ku jiraan daaqadaha iyo Linux. Waxaa jira heshaan inkastoo version xorta hore oo kaliya 50 photos loo gudbin karaa, in ka dib waa in aad bixiso.
Badan oo ku saabsan Transfer Simple Baro - Wireless Photo & Video kaabta, nidaameed & Share >> https://itunes.apple.com/us/app/simple-transfer-wireless-photo/id420821506?mt=8
WordPress wuxuu bixiyaa adeeg daruur ku salaysan, waayo, taasu aad enableds in sawiro qaado meel kasta oo iyaga si fudud wadaagaan. Marka aad sawiro ka iPad iyo iPhone wareejiyo DropBox, si fudud iyaga oo aad ka heli karto on your computer, internetka iyo qalab kale. Waxa aad bixisaa 2 GB meel daruur oo lacag la'aan ah. Wixii dheeraad ah, waxaad u baahan tahay inaad bixiso. Haddii aad jeclaan sawiro qaar ka mid ah, waxaad iyaga ku dari kartaa in ay jecel, offline aad iyaga ku eegaan karo.
Baro wax badan oo ku saabsan DropBox >> ( https://itunes.apple.com/en/app/dropbox/id327630330?mt=8 )
Kala iibsiga sawir 4.WiFi
Waxa kale oo hab wireless si ay u gudbiyaan sawiro. Waxaa loo isticmaali karaa si ay u kala iibsiga ballaaran iyo sidoo kale videos. Waxa uu qeyb ka ugu fiican xogta Meta sawirro la sidoo kale ku wareejin karaa, oo uma baahna wax ka kaaftoomi dhinaca user.
Baro wax badan oo ku saabsan WiFi Photo Transfer >> ( https://itunes.apple.com/us/app/wifi-photo-transfer/id380326191?mt=8 )
5.Photo Bedelka App
Photo Transfer App, sida ay magaca soo jeedin, waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu wareejiyo sawiro iyo videos dhaxeeya iPad, iPhone, PC iyo Mac badan WiFi. Waxa si fudud xogta kasta multimedia ka telefoonka aad xisaabinta iyo qeybsanaan ku xigeenka wareejin karaan
Waxaa kaloo loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan sawiro dhexeeya iPhone iyo iPad iyo sidoo kale HD videos u dhexeeya laba qalab kasta oo tufaax. Waxaa sidoo kale ilaaliyaa metadata ee sawirka. Kala iibsiga sawirka waxaa lagu qaadayaa qaab ceeriin iyo lahayn qaab diinta ka qaadataa meel. Browser web kasta waxaa loo isticmaali karaa oo gebi ahaanba ka madax-bannaan browser loo isticmaalo. Sidoo kale waxaa jira codsi desktop for this ah iyo iibsiga noqon kartaa xataa fudud. Ugu dambeyntii, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso hal mar oo keliya ah ee codsiga oo aad u isticmaali karaa aad nooshahay si ay u gudbiyaan photos u dhexeeya qalabka tufaax aad iyo aad kaaftoomi computer oo lacag la'aan ah.
Baro wax badan oo ku saabsan Photo Transfer App >> ( https://itunes.apple.com/us/app/photo-transfer-app-easily/id365152940?mt=8 )
Transfer Image waa, in aad si xor ah u gudbiyaan images dhaxeeya iPad, iPhone iyo PC la WiFi si aadan u baahnayn cable USB kasta. Waxa si fudud oo lagu kalsoonaan karo in ay isticmaalaan oo dhan aad u baahan tahay waa qalabka aad ka dibna iyaga ku xidhmaan WiFi. Looma baahna in la isticmaalo email, midkood. Sidaas waa inaad siisaa isku day ah.
Baro wax badan oo ku saabsan Photo Transfer App >> ( https://itunes.apple.com/us/app/wireless-transfer-app-share/id543119010?mt=8 )
7. Transfer Wireless App
Haddaba tanu waa kala iibsiga app sawir aad u isticmaali karto si ay u gudbiyaan sawirro aad u dhexeeya qalabka wax sida iPad iyo iPhone. Waxa kale oo aad isticmaali karto si aad gurmad sawiro aad, aad. Yaraanta kaliya ee waa in aad ku kici doona $2.99, sidaas darteed waa in aad garsoore in in ay isku dayaan.
Halkan waa fursad kale oo aad u iPad ama iPhone wareejiyo sawiro aad si sahlan. Oo waxay kaalinta 10-ka sare ee 55 dal. Sidaas waa inaad siisaa go a.
Baro wax badan oo ku saabsan Photo Transfer App >> ( https://itunes.apple.com/us/app/photo-transfer-wifi-drag-drop/id674978018?mt=8 )
Iyadoo Pro Photo Transfer, kuu soo gudbin karaa sawir kasta oo u dhaxeeya iPad, iPhone ama xataa kombiyuutarada. Waxaad xitaa ka heli kartaa sawiro aad dhex browser ah ilaa iyo inta aad computer iyo qalabka aad mobile ka yar tahay shabakad isku mid ah.
Baro wax badan oo ku saabsan Photo Transfer App >> ( https://itunes.apple.com/us/app/photo-transfer-pro-upload/id662047059?mt=8 )
PhotoSync, sida ugu wanaagsan ee ay ku wadaagaan iyo in dhufto ee wax lagu wareejiyo sawiradaada. Oo waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa in gurmad sawiradaada. Waa sahlan tahay, comvenient iyo aad u caqli badan in ay ka shaqeeyaan inkastoo uu qiimihiisu $2.99 ka jeebkaaga.
Baro wax badan oo ku saabsan Photo Transfer App >> ( https://itunes.apple.com/us/app/photosync-wireless-photo-video/id415850124?mt=8 )
> Resource > iPad Apps Transfer> Top 10 Photo u iPhone iyo iPad